Kobcinta Kobcinta Suuqgeynta Mawduuca | Martech Zone
Kobcinta Kobcinta Suuqgeynta Mawduuca
Khamiista, Febraayo 13, 2014 Khamiista, Febraayo 13, 2014 Douglas Karr
Mid ka mid ah sababaha ay wakaaladeena u noqon weydo dukaan nuxurkiisu yahay maxaa yeelay hadafka suuq-geynta internetka ma ahan inay soo saaraan waxyaabo, waa inay kobciyaan ganacsigaaga. Waxaan u soo saarnaa waxyaabo (inta badan faahfaahinta iyo waraaqaha cad) ee loogu talagalay macaamiisha, laakiin gujinta daabacaadda waa hal talaabo oo xeelad aad u ballaaran ah. Fahmitaanka cidda aad wax u qoreyso iyo nooca waxyaabaha ay raadinayaan waa inay dhacaan kahor. Mar alla markii aad daabacdo waxa ku jira, markaa waxaad u baahan tahay inaad hubiso in la isku daray oo si habboon kor loogu qaaday si loo kordhiyo gaadhista.
Waa maxay Hoobitaanka Kobca?
Waxaa jira caqabad hoose oo soo gelitaanka soosaarka sheyga loogu talagalay… laakiin helitaanka ereyga ayaa noqon kara mid aad qaali u ah. Bilaabashada marxaladaha hore iyadoon lacag lagu xayeysiin ama kor loogu qaadin wax soo saarkooda waxay la imaan doonaan xeelado suuq geyn aan dhaqameed ahayn si ay u helaan macaamiil cusub en mass. Tan waxaa loo yaqaanay sida kicinta kobaca waxayna ku dartay SEO, Imtixaanka A / B iyo Suuqgeynta Mawduuca.
Haddii aad rabto in balooggaagu kobco, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad wax ama laba ka barato jabsadaha waxyaabaha ku jira. Isaga ama iyadu waa kuwo mashquulsan taraafikada oo aan diiradda saarin wax aan ahayn koritaanka. Xogtani waxay ku siin doontaa aragti yar gudaha maskaxdooda gudaha waxayna kaa caawineysaa inaad noqoto khawaarijtaada gaarka ah.
Sawir gacmeedkan ka socda dadka CoSchedule, Kalandarka tifaftirka warbaahinta bulshada ee cajiibka ah ee loogu talagalay WordPress oo leh tan astaamo ah. XUSUUSN: Infographics-ka ayaa ah istaraatiijiyad jabsi kobcineed oo cajiib ah!
Tags: Content Suuqisjiidjiidkicinta kobaca
zkipster: Xalka Liiska Martida ee Dhacdooyinka iyo Shirarka
Qalabka saxda ah ee Saameynta ama Wacyigelinta Saxafiga